२०३९ साल फागुन १५ पछि निर्माण भएको नेपाल मगर संघको मञ्चबाट आधिकारिक रुपमा मगरहरुको भेला आमसभा, अन्तरक्रिया आदिमा उपस्थिति दिने क्रममा महाकालिको कञ्चनपुर, डडेलधुरा, डोटी पुग्नु पर्यो । डडेलधुरा आलितालका गणेश थापा मगर त्यसैगरि डोलका पदम डालामगरसंगको भेटघाट भुल्न सक्तिन । डोटिको बुँडरका भेटघाटमा सुनलाल मगर सम्झन्छु । गणेश थापाका सहोदर भाईको घरमा विहानको खाना खाँदाको सम्झना आलै छ । बन विचमा छाप्रो । बनकै जग्गा जोत-कोर गरि पारिवारिक जीवन खर्च गर्दै गरेको देंखे । त्यस्तोलाई जनकपुरको अंचलको तराई जंगलमा रहाङ्गबालि भन्ने चलन छ । एक पल्ट म ने.म.स.का केन्द्रिय सदस्य डोटीरुपस काँडाका प्रेम आले र वहाँका मामासँग भाडाको जीपबाट पनि डोटी पुगेको छु अतरियाबाट । त्यसैगरि कञ्चनपुर, महेन्द्रनगरका नरविर पुन र वहाँकी श्रीमती र छोरीसँग महाकालिको तिरैतिर भारतबाट डडेलधुरा, सिमलखेत साँझमा सोती जी.को घरमा बास बसेको छु । हाल वहाँ स्वर्गिय भइसक्नुभएको छ । त्यहाँको कार्यक्रममा स्थानिय व्यक्ति रामबहादुर घर्तिमगरको राम्रो सहयोग रहेको थियो । यसरी महाकालिको कार्यक्रममा नेपाल मगरसंघ केन्द्रिय समितिका स्वर्गिय विरबहादुर राना महासचिव सिवलाल थापा अनि यसैगरि ब्रिटिश आर्मिबाट अवकास प्राप्त कप्तान केशर पुन लगायत केन्द्रिय र स्थानिय मगर मित्रहरुको सक्दो सहयोग पाएको छु । पदम डाला जी.को सक्रियतामा डोलाकै स्थानिय विद्यालयको प्राङ्गनमा खुला आमसभा मगरहरुको सम्पन्न भएको थियो । पदम जी.ले आफ्नै निवासमा मिठो खाना खुवाएर आथित्य सत्कार दिनुभएको अहिले पनि म सँग ताजै छ । कैलाली, टिकापुर, बनगाउँमा नेपाल मगर संघको जिल्ला सम्मेलन कार्यक्रम स्थनिय विद्यालयको प्राङ्गनमा सम्पन्न भएको थियो । सहभागिहरुको लागि मासु भातको व्यवस्था थियो । त्यो भेलाको ठिक अघिल्लो साँझ डाँडापारि घाम जानै लाग्दा बजारमा एकजना मगर कुर्ता, सुरुवाल, मफलर, टोपी र दोकाँधे झोलामा देखा परे । यो टिकापुर बजारको कुरा हो । वहाँ सम्मलेन अवलोकन गर्नुआउनु भएको रहेछ वहाँकै भनाई अनुसार । वहाँ पछि नेपाल मगर संघको केन्द्रिय सदस्य राप्ती अञ्चलबाट बन्न पुग्नुभो । यसवेला वहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ । त्यसवखतको त्यो मानिस रुकुमका नरेन्द्र बुढामगर हुनुहुँदो रहेछ । नेपाल मगर संघ सँग एउटा संस्कार थियो त्यो के भने जहाँ केन्द्रिय समितिको बैठक हुन्थ्यो त्यहाँ जिल्ला सम्मेलन अनिवार्य नै हुन्थ्यो । यसो गर्दा आफ्ना केन्द्रिय मगर नेताहरुसँग स्थानियहरुको देखादेख र भेटघाट सजिलै सँग हुने गथ्र्यो । बनगाउँको यो सम्मेलनमा स्थानिय व्यक्ति श्रद्धेय तेजबहादुर पुनको यथेष्ट सहयोग रहयो । त्यस भेगका वजिर सिं थापमगरको पनि प्रंसगबस सम्झना आईरहन्छ । त्यसैगरि मैले फुलबारि डिपोको केन्द्रिय बैठक र त्यसपछिको डिपो बजारको सम्पन्न आमसभा सम्झेको छु । जेठ महिना । यो सम्पन्न गर्न स्थानिय पूर्णबहादुर घर्तिमगरको पूर्ण हात छ । यसमा वहाँलाई आफ्नो परिवार र स्थानिय व्यक्तिहरुले पनि राम्रै सहयोग पुर्याएको बुझिन्छ । लामो समय पश्चात कलम चलाउनुपर्दा धेरै कुराहरु विस्मृतिमा परिणत भएका छन् । त्यसताका डिपो सुकुम्बासी बस्ति थियो । नेपाल मगर संघका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष स्व. मनविर गर्बुजाको उठबसको कारण मेरो लागि डिपो बजार झनै सम्झनायोग्य भएको छ । मलाई वहाँले जसरी चिन्नु भएको थियो, थियो । समय आउँछ । म मनविर गर्बुजा जो ब्रिटिश आर्मिको अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेन्ट हुनुहुन्थ्यो वहाँको सम्बन्धमा अप्ठेरो नमानि दुई शब्द खर्च गर्ने प्रण गर्दछु । यो लेख्दै गर्दाको वर्ष भित्र म कैलालीको सहजपुर कार्यक्रममा भाग लिन पुगें साथमा तेज तारामी । त्यहाँसम्म पुग्न जीपको खर्च स्थानिय लेक्चरर लालबहादुर थापामगरबाट भएको थियो । मगरहरुको सिलसिला चलाउँदा यि मगर व्यक्तित्वलाई भुल्न जाँदा सुदुर पश्चिमाञ्चलको सम्झना धमिलो हुनेछ । कैलालीकै मिनबहादुर दर्लामी जसको घर आंगनमा एक दिन एक रात मगर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । यो गाउँको नाम कैलाशपुर । राजेश बुढामगर पनि अविष्मरणिय छन् । पुनः म सहजपुरको सम्झना गर्दै छु । यो सम्झनामा खड्गबहादुर सारु, लोकबहादुर सारु जहाँ म र म सँगैकाले विहानको खाना स्थानिय माछासँग लियौं । सुदुरपश्चिमाञ्चलको सम्झना गर्ने क्रममा नेपाल मगर संघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन मेरै सभापतित्वमा कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा स्थायि बरिष्ठ नागरिक श्रद्धेय मणिराम घर्तिमगरको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । प्रमुख अतिथि भारितिय गोर्खा राईफल्सका सिपाही हुनुहुन्थ्यो । वहाँ हाल स्वर्गिय हुनुहुन्छ । वहाँको एकमात्र छोरा देवबहादुर घर्तिमगर हुनुहुन्छ टिकापुरमै । त्यसठाउँका मगर व्यक्तित्व तेजबहादुर पुनमगर र के.एस. थापाको सहयोग महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सराहनीय रह्यो । जिल्लाबासि युवा नेता तेज तारानी मगरको काँधमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारि थियो । आठौं महाधिवेशन (२०६०) बाट मैले आफ्नो केन्द्रिय अध्यक्षताको स्वेच्छिक अवकाश प्राप्त गरें । यो महाधिवेशनले क्रमशः ब्रिटिश आर्मिका रिटायर्ड कप्तान यमबहादुर बुढाथोकी मगर र उस्तै देउबहादुर राना अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । यो महाधिवेशनले महासचिवमा रामचन्द्र थापालाई निर्वाचित गर्यो । यसमा अन्य निर्वाचित पदाधिकारि र सदस्यहरुको नामावली उल्लेख गर्न असमर्थ भएकोमा म क्षमा चाहन्छु । नेपाल मगर संघको ईतिहाँस लेख्ने क्रममा प्रारम्भदेखि वर्तमान सम्मका सम्पूर्णको नामावलि उल्लेख हुनेनैछ । महाधिवेशन सम्पन्न पश्चात लगत्तै डि.एफ.आई.डि.ले प्रोजेक्ट चलाउन दिएको रु. १० लाख को उचित व्यवस्थापन गर्न मगर युवा यमबहादुर झेंडी मगर, पाल्पा निवासीलाई कार्यकारिणिको अधिकार प्रदान गरियो । सुदुरपश्चिमाञ्चलमा सम्पन्न नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समितिको गतिविधिलाई टुङ्ग्याउनु अघि यसको १७औं राष्ट्रिय सम्मेलनको थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु । यो कार्यक्रम महाकालि नदिको पश्चिम किनाराको चाँदनि दोधारा गा.वि.स.मा सम्पन्न भएको थियो । यसको व्यवस्थापनमा नरविर पुन र डोटीका प्रेम आले मगरको भूमिका सराहनिय छ । सहभागिहरुसँगै मैले आफ्नो बास स्थानिय सामाजिक तथा राजनितिक व्यक्तित्व मानबहादुर विश्वकर्माको विशाल भवनमा राखेको थिएँ । त्यो सम्मेलनमा पुर्व मन्त्रि स्वर्गिय नारायण सिं पुनमगर आफ्नो निजि हेलिकप्टरमा नेपाल मगरसंघको पूर्व महासचिव सुरेश आलेमगर सहित उपस्थिति हुनुभो । सम्मेलनमा अनेकन बौद्धिक व्यक्तित्व मध्ये वि.के.रानाको पनि उपस्थितिले रौनकता ल्याएको थियो । यो सम्मेलनको सम्पन्नतापश्चात मेरो बास महेन्द्रनगर निवासी नरविर पुनमगरको होटलमा भयो । साथमा युवाहरु मध्ये रत्न सिंह राना पनि थिए । बजारका सथानिय व्यक्तित्व भारतिय गोर्खा सेनाका अवकाश प्राप्त कप्तान श्रद्धेय पदमबहादुर थापाको सम्झिने लायकको आतिथ्य सत्कार रह्यो । म आफ्नी श्रीमति विद्यासँग र साथै अन्य साथिहरु पनि विवादित टनकपुर व्यारेज अवलोकन तर्फ लाग्यौं । म धेरैपल्ट सदुरपश्चिमाञ्चल पुगेको छु । यो क्रममा प्रायसः नेपालगञ्ज घरबारि टोलका रामचन्द्र थापाको साथ सहयोग रहँदै आएको सम्झना गर्दछु । पहिलोपल्ट कैलालीको धनगढि टेक्दा बर्दिया निवासी टोप थापालाई टप ईन टाउनमा कार्यरत पाएँ वहाँले त्यसवेला राम्रो खातिरदारि गर्नुभयो । वहाँसँगै स्थानिय धेरै युवाहरु परिचित भएका थिए । नेपाल मगर विद्यार्थी संघको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनार्थ प्रमुख अतिथिको रुपमा धनगढि पुगेको थिएँ । टोप जी.लाई भेटेको झन्डै झन्डै १५ वर्ष अघिको जस्तो लाग्छ र हालसम्म पनि वहाँसँगको भेटघाट निरन्तर छ । घनगढि गइरहँदा मेरा भान्जाहरु बजारमा कार्यरत थिए र छन् पनि वहाँहरु चन्द्रलाल क्याप्छाकी र जीतबहादुर हुनुहुन्छ । यो स्मरण गर्दै गर्दा नेपाल मगर संघ जिल्ला समिति कैलालीका वर्तमान अध्यक्ष टेक नाम्जालीका साथै दिपा थापा, चक्र अस्लामी, खड्गहरुको सम्झना आईरहन्छ, त्यसैगरि हसनपुरका कृष्ण थापमगर । एउटा विर्सनै नसकिने नाम हो –शक्ति श्रिस । वहाँको धनगढि निवासको आतिथ्य सत्कार मेरो लागि अविष्मरणिय छ । ने.क.पा. माओवादीबाट अलग भएर बसेका मोहन सिं सारु र नविन्द्र राना पनि मेरो सम्झनामा आइरहनुहुन्छ । सुदर पश्चिमाञ्चलको लागि मेरो भ्रमणले ल्याएको विभिन्न खाले गतिविधि जस्तै महाधिवेशन, जिल्ला अधिवेशनहरु, जिल्ला सम्मेलनहरु, गोष्ठिहरु, अन्तरक्रियाहरु, प्रशिक्षणहरु, समुह–समुहको भेटघाटहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा हजारौं हजार मगरहरुको विचमा पुग्ने सौभाग्य मलाई नेपाल मगर संघले दिएको हो । यो वर्णन आफै पनि अन्तिम चाहिँ होईन आउने दिनमा मेरो आवश्यकता सुदुरपश्चिमाञ्चल र त्यहाँ बसोबास गरिरहेका मगर समुदायलाई परिनै रहला भन्ने आशा गर्दछु । मगरहरुको अवस्था थोरै भएपनि मैले बुझ्ने मौका पाएँ । मबाट आगामि दिनमा मगरहरुले प्राप्त गरेको शिक्षा, ज्ञानबाट उनिहरुलाई मलाई विश्वास छ, अग्रगामि बन्न प्रेरित गर्लान् र बाटो नविराईकनै आफ्नो अन्तिम लक्ष्य सम्म पुग्न सफल होलान् ।
मितिः २०६९ पुस २८ गते तद्नुसार जनवरी १२,२०१३ धोविघाट, ललितपुर
Last Updated on Tuesday, 29 January 2013 19:09
संविधानसभा विघटन हुनु पनि राजनीतिक सहमति कायम नहुदाकै परिणाम थियो । अहिले सहमति नजुट्नुको मुख्य कारण पनि संविधानका अन्तर बस्तुमा दलहरुबीच मतभेद नै हो । शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली आदिमा सहमति हुन सकिरहेको छैन भने यता दलहरु बीच सरकार सञ्चालनको विषयमा पनि तिव्र मतभेत कायम छ । यसमा प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको आ – आफ्नो अडानमा लागेका छन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री स्वीकार गदैनौ भन्दै निषेधको राजनीति अगाडि बढेको छ । संविधानसभा विघटन हुनुमा सबै दलहरु माथि उतिकै दोष लागेको अवस्थामा व्यक्ति किटेरै सरकार स्वीकारदैनौ भन्नु राजनीतिक दलहरुकै मुर्खता हो । भोली वर्तमान सरकारमा अर्काे व्यक्ति आए पनि यो नेतृत्व हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिले आवाज घन्काउने छन् । वर्तमान समयमा सहमतिको राजनीति अगाडि बढाउनु पर्नेमा निषेध गरि अगाडि बढ्न खोज्नु राजनीतिमा दुर्भाग्य बनेको छ । त्यस कारण पनि संविधानका सैद्धातिक भतभेद भन्दा अहिले को प्रधानमन्त्री हुने त्यस कुराले सिंगो राजनीतिको गाँठो कसिलो बनेको छ । मुलुकको राजनीतिमा यी कुरा बाधक बनिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरु बीच सहमति नजुट्दा निर्वाचन कहिले हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन । दलहरु बीचमा रहेको अविश्वास र हिलो छयापाछाप गर्ने प्रवृति आदिका कारण पनि पुस महिनासम्म सहमति जुट्न गाह्रो छ । पुस सम्म राजनीतिक दलहरु बीच सहमति कायम भएन भने बैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट गरिसकेको छ । सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन अध्यादेश मार्फत् अगाडि बढाउँन खोजे तापनि राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश पारित गरिरहेको अवस्था छैन जसका कारण पनि निर्वाचनका धेरै प्रकृया अगाडि बढ्नै सकेको छैन । राजनीतिक सहमति नहुदा ती सबै काम रोकिएका छन् ।
सहमतीय सरकार गठन गर्नका लागि राष्ट्रपति आफैले पहल गर्न सक्ने अवस्था अहिले देखिन्न । किन भने राष्ट्रपति अन्तरिम संविधान भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । यदि सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पहल गर्ने हो भने पहिले देशको कार्यकारी शक्ति आफैले लिनु पर्ने हुन्छ, तव मात्रै त्यस्तो राजनीतिक कदम चाल्न उनले सक्छन् । यता राष्ट्रपतिले पाँच पटक सम्म दलहरुलाई पटक– पटक गरि सहमतिको सरकार गठन गर्न समय सीमा दिएका छन् तर त्यसरी सहमतिका लागि आह्वान गदैमा केही हुने वाला छैन । राजनीतिक सहमतिको विषय राष्ट्रपतिको भन्दा पनि दलहरुको बिषय हो । राष्ट्रपति पनि यस्तो प्रकृयामा अगाडि बढ्नु हुदैन । दलहरुको राजनीतिक सहमति भन्दा अरु विकल्प छैन । राष्ट्रपतिले संविधानको दफा ३८ लाई उल्लेख गरेर सरकारबाट तिमी जाउ भन्ने र ३८ को २ अनुसार पनि जान अरुले प्रेरित गर्ने आदि कुरा गर्न मिल्दैन्थ्यो । संसद् हुदा मात्रै यस्तो दफा उल्लेख गरि एउटा विकल्प नभए अर्काेमा जान सकिने अवस्था रहन्छ । राजनीतिक रुपमा सहमति जुटाउँन उनले छलफल गर्न सक्छन् तर अहिले जस्तो संविधानका धारा उल्लेख गदै अगाडि बढ्न उचित थिएन । अहिले राष्ट्रपतिको भूमिका माथि मात्रै होइन उनका सल्लाहाकार माथि पनि गम्भीर प्रश्न तेस्सिएको छ ।
बर्तमान सरकार काम चलाउ भए पनि लामो समय सम्म टिकिरहनु पछाडि भारतको समर्थन र साथ रहेको भन्ने चर्चा चले पनि त्यस्तो वास्तविकता होइन । मधेशवादी दलहरुको साथ सरकारलाई भएकाले त्यो भन्न सकिने अवस्था हो, तर भारतले चाहेर मात्रै सबै कुरा हुदैन । भारतले संवैधानिक राजतन्त्र राख्न चाहे पनि त्यो संभव नभएको वास्तविकता लुकाएर लुक्दैन ।
डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएयता भारतसंग उनको राम्रो सम्बन्ध कायम छ । पहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुदा भारतसंग विग्रिएको सम्बन्ध अहिले सुध्रिएको पक्का हो । तर भारतकै हस्तक्षेपका कारण राजनीतिक गतिरोध लम्वियो र सत्तामा बाबुराम टिकिरहे भन्नु गलत कुरा हो । राजनीतिक दलहरु नै कुर्चीको लडाइँमा लागेका कारण गतिरोध लम्बिदो छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण भारतको भूमिका देखिएको नै छ । जनताको विकास भएमा मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । हामी कमजोर हुदा विदेशी हस्तक्षेप बढ्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।
माओवादी भित्र सत्ता सञ्चालनको विषयलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बीच द्वन्द्व पनि बाहिर आएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिको पनि आफ्नो अडान राख्नुलाई नराम्रो मान्न मिल्दैन । विश्वका राजनीतिक अनुभव हेर्दा जसले संसद् विघटन गराएको छ उसैले नै निर्वाचन गराएको इतिहास छ । त्यसैले बाबुराम नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउँदा कुनै फरक पदैन । प्रतिपक्ष दलहरुले सहमतिका लागि पहल गदै संविधान संशोधन गर्न र निर्वाचनका लागि कानुनी व्यवधान पनि हटाउँने भन्ने कुरामा ध्यान नै छैन केवल सत्ता छाडेर कांग्रेसलाई देउ भन्नु तर्क संगत छैन । कांग्रेसले पनि पहिले मुद्धामा सहमति गरेर निर्वाचन गराउँछौ भन्न सक्नु पर्दछ ।
राष्ट्रपतिले भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय नेताहरुसंग राजनीतिक भेटघाट गरे पनि ती भेटले राजनीतिमा खासै प्रभाव पर्ने देखिन्न । किन कि कसैले भन्दैमा वा सल्लाह दिएर राष्ट्रपति अगाडि बढ्ने अवस्था नै छैन । भारतका राजनीतिज्ञहरुले यही सरकारलाई नै सहमतिको सरकार बनाउँन पहल गर्न र आफूले सक्दो सहयोग गर्ने कुरा उनीसंगको भेटमा भन्न सक्छन् । तर भारतमा भारतीय नेताहरुसंग राष्ट्रपतिको राजनीतिक भेटघाटले नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल ल्याउने बाला छैन । राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि अन्य दलहरुलाई पनि यही सरकारमा आउ भनेर आह्वान गर्न सक्छन् । अहिले राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा सबै गुज्रिदै गएको अवस्थामा त्यो परिस्थिति सृजना हुन सक्छ ।
कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुनु पर्ने अडान अगाडि सारे पनि उसले चाहे अनुरुप आफैले सरकार बनाएर अगाडि बढ्छु भनेर एक्लै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । अन्य दलहरुको साथ र सहयोग विना अहिले कसैले केही गर्न सक्दैन । त्यसैले पनि राजनीतिक सहमतिका आवश्यकता परेको हो ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर निर्वाचन गराउँन खोज्नुको पछाडि कांग्रेसको खेल एउटै छ त्यो हो राज्यको स्रोत र साधन प्रयोग गरि निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने सोच उसमा हावी छ । केही सीटमा तल माथि भए पनि सरकारको नेतृत्व भयो भन्दैमा पूरै निर्वाचन आफ्नो अनुकूल बनाउन निकै गाह्रो हुन्छ । संकीर्ण सोचका साथ आफूले निर्वाचन गराएको शाख लिनलाई कांग्रेसले निर्वाचनको सरकार आफैले चाहेको स्पष्ट हुन्छ ।
दलहरुले आफ्नो पकड कति छ भनेर नाडी छाम्दै निर्वाचनमा जान ढिलाढाला गरे पनि निर्वाचनमा नगइकनै सुख छैन । निर्वाचन देखि डराएर भाग्न त दलहरु सक्दैनन् अब । निर्वाचनमा हाम फाल्नै पर्दछ । निर्वाचनमा नगएको खण्डमा उपलब्धी सबै गुम्दै जान्छ ।
अहिलेको संक्रमणकाललाई सामान्यकालमा रुपान्तरण गर्न दलहरु जिम्मेवार देखिनन् । अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिएको राजनीतिलाई सही अवतरण गराउन त्यति गाह्रो पनि छैन, तर दलहरुले गर्न नचाहँदा समस्या खडा भएको हो । नेपालको समस्या जटिल हुदै होइन जटिल बनाइको छ । दलहरुले चाहेको भए १४ जेठमा संविधान पनि आउन सक्थ्यो ।
अहिले राष्ट्रपतिको भूमिका पनि विवाद परेको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ भन्नु पर्ने विषय नै थिएन । त्यसरी भन्नु प्रतिपक्ष एमाले र कांग्रेसको भावनामा अनुरुप थियो । अहिले सहमतिका लागि दलहरुलाई आह्वान गरि समय सीमा दिनु पनि एमाले र कांग्रेस पार्टीकै निर्देशन अनुरुप भएको थियो । दलहरुले नै राजनीतिक सहमति निकाल्ने हो । राष्ट्रपतिले दलहरुको आसय अनुरुप चल्नु उचित थिएन । पहिले राष्ट्रपतिले राजनीतिक नेता जस्ता भाषण गदै हिडे भने अहिले आफ्नो धरातल बुझ्न थालेको आभास हुन्छ । आफूलाई जे उचित हुन्छ त्यही गर भन्ने र राजनीतिक एजेण्डामा छलफल गरि सहमति नगर्ने दलीय चरित्रले नेपालको राजनीति अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ ।
(भारतका पूर्व राजदूत तथा (त्रिवि) राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालसंग गोविन्द लुइँटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
Last Updated on Saturday, 29 December 2012 11:21
तथ्याङक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको जनगणनाको नतिजामा पहिले भन्दा धेरै तथ्याङक घटवढ देखिएको छ । दश बर्षको अवधिमा गरिएको जनगणनामा धेरै जातिको संख्या घटेको मात्रै छैन केही जातिको त जनगणनामा सूचि नै छैन् । त्यो कसरी र किन भयो भन्ने कुरा विश्लेषणको खाँचो छ । त्यसको कारण पनि आम जनताले थाहा पाउनु पर्छ ।
जनगणनामा समूह छुट्याएर - को दलित को मधेशी र को बाहुन क्षेत्री हो त्यस अनुसार बर्गीकरण गरिएको छैन । आदिवासी जनजाति सूचिकरण उच्चस्तरीय आयोगले सिफारिस गरेका धेरै जाति मध्य पहाडका राईहरु यसमा समावेश भएका छन् । सूचिमा नपरेको पनि त्यसमा समावेश गरिएको छ । त्यो राम्रै कुरा हो । सुनुवार र गुरुङको संख्या अहिले ह्वातै घटेको देखिन्छ । सुनुवारको ४० हजार र गुरुङको करीब २२ हजार जति संख्या घटेको तथ्याङकले देखाउँछ । गुरुङ किन घटे त भन्नेमा यो जाति धेरै विदेश गए भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिएला, तर गुरुङबाट घले, लोपा आदि छुट्याएका कारण पनि त्यो संख्या घटेको तर्क गरिएको छ । त्यो किन घट्यो अहिले विश्लेषण गर्न गाह्रो छ ।
विदेशमा जाने नेपालीहरु नेपालमै गणना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने हो, तर त्यसो गरिएको छैन । विदेशबाट नेपालीले पठाएको रेमिट्यास्ले नेपाली समाज धानिएको छ, तर उनीहरु राष्ट्रिय जनगणनामा छुट्नु दुर्भाग्य हो । रेमिट्यासको गणना हुने र मानिसको टाउको गणना नहुने नीतिगत व्यवस्था व्यवहारिक देखिन्न ।
मातृभाषा भनेको आमाले जे बोल्छ त्यो भाषा होइन । आमाले बोल्दैमा त्यस जातिको मातृभाषा त्यो कायम हुन सक्दैन । गुरुङ जातिले नेपाली बोल्छ भने उसको मातृभाषा नेपाली होइन । मातृभाषा समुदायले जे बोल्छ त्यो भाषा हो । जनगणना हुन अगाडि पनि यस विषयमा छलफल गरिएको थियो । जनजातिका केही विज्ञहरु पनि जनगणनाको अनुगमनमा सहभागी थिए, तर जातिहरु किन हटे भन्ने कुरा उनीले समेत चित्त बुझदो जवाफ दिन सकेनन् । जनगणनाको तथ्याङकीय विधि अनुरुप २०० भन्दा कम संख्या रहेका जातिलाई हटाएको उनीहरुले बताएका छन् । त्यो भन्दा कम रहेका कुसुण्डा भने त्यसमा समावेश छन् । कोही त्यहा हुने कोही नहुने त्यो न्याय संगत देखिएन ।
वास्तवमा जनगणनाले देशको समग्र र वास्तविक चित्र देखाउने काम गर्दछ । तर अहिलेको जनगणनामा भएका जाति समेत छुटेका छन् । भएका जातिहरु जनगणनामा नसमेटिनु उनीहरुको अस्तित्व मेटिनु हो । हिमालका शेर्पा जति भोटेमा समावेश गरिएको छ । थोरै संख्यामा हुदैमा हटाउदा उनीहरु राज्यको सेवा सुविधाबाट पनि हट्न सक्छन् । त्यसकारण पनि जनगणनाको विश्वसनीयता माथि प्रश्न तेर्सिएको हो । राज्यका जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरु समेत यस्तो त्रुटि हुदा समेत गम्भीर देखिनन् त्यसकारण थप आशंका पैदा भएको छ । यदि जनगणनाको नतिजालाई सुधार्न सकिने अवस्था हो भने त्यसलाई बेलैमा सच्याउनु उचित देखिन्छ । मनोग्राफ सुधार्नमा के कस्तो सहयोग चाहिन्छ त्यसमा सहयोग गर्न हामी तैयार छौ । जनगणनालाई विश्वसनीय र उपयोगी बनाउन बेलैमा सबै लाग्नु पर्ने भैसकेको छ ।
(राज्यसत्ता डटकमले पुसको पहिलो हप्ता काठमाडौंमा आयोजना गरेको जनगणना बहसमा आदिवासी जनजाति सूचिकरण कार्यदलका संयोजक डा. ओम गुरुङले व्यक्त गर्नु भएको विचारको सम्पादित अंश)
राज्यसत्ता नेपाल व्युरो
Last Updated on Sunday, 06 January 2013 04:43